के अब फेसबुक चलाउन पैसा तिर्नुपर्ने हो? - Everest Dainik - News from Nepal
के अब फेसबुक चलाउन पैसा तिर्नुपर्ने हो?
काठमाडौं । फेसबूकले आफूलाई सधैं निःशुल्क राख्ने भनी नारा बनाएको थियो । तर अहिले उसले त्यो नारा त्याग्न लागेको देखिन्छ ।
बिजनेस इन्साइडर पत्रिकाले लेखेअनुसार, फेसबूकले होमपेजको नारा चुपचाप परिवर्तन गरेको छ । पहिला लेखिएको थियो, ‘यो निःशुल्क हो र सधैं हुनेछ ।’ अहिले त्यो नारा ‘यो छिटो र सजिलो छ’ मा परिवर्तन गरिएको छ ।
त्यो परिवर्तन अगस्ट ६ र ७ को बीचमा गरिएको बताइएको छ । यो परिवर्तनको औपचारिक घोषणा भने गरिएको थिएन ।
फेसबूक चलाउनका लागि पैसा तिर्नुपर्दैन तर सित्तैमा चलाउने प्रयोगकर्ताको तथ्यांक जम्मा गरेर फेसबूकले निकै फाइदा उठाउने गरेको छ ।
त्यो आँकडालाई उसले कम्पनीहरूलाई बेच्ने गरेको छ । कम्पनीहरूले त्यसपछि प्रयोगकर्ताहरूलाई उत्पादनका विज्ञापन पठाउने गर्छन् ।
अधिवक्ता तथा डिजिटल कानूनविज्ञ जोसे एन्टोनियो कास्टिलोले युरोपेली संघको निर्देशनपछि फेसबूकले यो परिवर्तन गरेको हुन सक्ने बिजनेस इन्साइडरलाई बताए । संघले व्यक्तिगत डेटा पनि एक किसिमको भुक्तानी नै भएको भनेको छ ।
फेसबूकले प्रयोगकर्ताहरूसँग सीधै पैसा लिने कुनै संकेत त दिएको छैन तर कम्पनीको नारा परिवर्तन भएसँगै फेसबूकले अब निःशुल्क रहने प्रत्याभूति चाहिँ नदिएको प्रस्ट छ ।
फेसबूकमा थिंग्स यू शुड नो भन्ने सेक्सन छ र त्यहाँ एउटा अस्वीकारोक्ति छ जसमा लेखिएको छ, ‘फेसबूक प्ल्याटफर्म सधैं निःशुल्क हुनेछ भनी हामी ग्यारेन्टी दिँदैनौं’ । लाेकान्तर डट.कमबाट